Somaliland oo ciidankii ugu badnaa ku daabushay magaalada Laascaanood & malayshiyaad ku qulqulaya. | Caroog News
Somaliland oo ciidankii ugu badnaa ku daabushay magaalada Laascaanood & malayshiyaad ku qulqulaya.
Xiisad u dhexaysa ciidanka booliska maamulka Somaliland iyo malayshiya beeleed hubaysan ayaa ka taagan magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool, kadib rabshada xilli hore oo saaka ah ka dhacay gudaha magaalada.
Xiisada ayaa ka dhalatay, kadib markii rag maleeshiyaad ay si xoog ah xabsiga Laascaanood ugala baxeen saddex ruux oo muddo ku xirnaa, isla markaana lagu eedeeyay inay dileen dad shacab ah.
Goob joogayaal ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa warbaahinta u sheegay in dadka maleeshiyaadka ay xabsiga kala baxeen ay yihiin kuwo dad shacab ah ku dilay weerar ka dhacay koonfurta Laascaanood, balse markii dambe gacanta lagu soo dhigay.